Isina mvura Sheet Coil Inofa Series - China Isina Mvura Sheet Coil Inofa Mutengesi, Fekitori -Jwell
Isina mvura Sheet Coil Die Series
PVC, EVA, Pe nyowani mhando yemvura isina zvinhu ine yakanyanya kuita kweanopokana-kubvumidzwa, mvura-proofness, thermo-kugadzikana uye cryogenic pfuma, yakakwirira simba uye elongation uye vane mamirire kukwegura nemishonga, anoshandiswa nevakawanda isapinda pakuvaka padenga indasitiri uye
kuvakwa kwevanhu, pasi pevhu, mugero, gungwa rekugadzira, nezvimwe.
● CAD yakawanda inogadzira zvinhu kugovera zvakafanana uye kuziva zvigadzirwa zvakafara.
● Iyo yekurebesa kufa muromo yakasimudzira yunifomu maitiro, yakadzora kuwedzera kwefa, yakanyanya kuvandudza maitiro ekugadzirisa.
● Mutsara wekupindirana kweiyo curve yakaumbwa pamubatanidzwa pakati penzvimbo mizhinji yefa kamuri uye kufa miromo kunogona kuvandudza kuyerera kwedivi nzira uye kugovera.
● Micro-inogadziriswa yepamusoro yekufa muromo uye inoshanduka yakadzika kufa miromo yekuburitsa hwakasiyana hukobvu （1-4mm, iyo yakakwira iri 10mm.）
● Nebasa rekugadzirisa bar yekugadzirisa uye kukodzera kubudiswa kwezvinhu zvakasiyana uye ukobvu.
Lithium Bhatiri Yakawedzera Series